सूचना आयोगको प्रमुख आयुक्तमा गुरुङ सिफारिस - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौंः सूचना आयोगमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको सिफारिस भएको छ । उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको अध्यक्षतामा बसेको सिफारिस समिति बैठकले पदाधिकारी सिफारिस गरेको हो । समितिले प्रमुख आयुक्तमा पूर्व सचिव महेन्द्रमान गुरुङको नाम सिफारिस गरेको छ ।
समितिले आयुक्तमा अधिवक्ता समेत रहनुभएकी कमला वली थापालाई सिफारिस गरेको छ । यस्तै, अर्का सदस्यमा रत्नप्रसाद मैनाली (दीपक) लाई सिफारिस गरेको छ । मैनाली पत्रकार हुन् ।
याे पनि पढ्नुस संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन अपराह्न ४ बजेः के छ कार्यसूची ?
सिफारिस समिति अध्यक्ष तुम्बाहाङ्फेले पदाधिकारी सिफारिस गरिएको बताइन् । उनले सिफारिस अनुसार नियुक्तिको प्रक्रिया भने बाँकी रहेको जानकारी दिइन् । सिफारिस अनुसार आयोगका पदाधिकारी मन्त्रिपरिषदले नियुक्त गर्नेछ । हालको पदाधिकारीको कार्यकाल पुस तेस्रो साता सकिँदैछ ।
ट्याग्स: डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, महेन्द्रमान गुरुङ, सूचना आयोग